हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् - नि: शुल्क बीएसएफ मगग खेती प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुहोस् • Yurie BSF
हमसे संपर्क गर्नुहोस Yurie BSF - बूग को बिना मैगगट खेती शुरू गर्न चाहते हो? वा तपाईं सक्नुहुनेछ, तर नतिजाहरू अधिकतम होइन र अझै गन्ध छ? Yurie BSF तपाईंलाई सहयोग गर्न तयार छ, कृपया विभिन्न विधिहरु मार्फत Yurie BSF लाई सम्पर्क गर्नुहोस्, Yurie यहाँ तपाईको सहयोगको लागि यहाँ छ।
कृपया Yurie BSF लाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईंको प्रश्नलाई सुश्री Yurie लाई सीधा पठाउनुहोस् Tel / WA 0812-2105-2808 मा। वा इमेल मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् [इमेल सुरक्षित] तपाईलाई आवश्यक जानकारी लेख्नुहोस् र हामी यसलाई तुरुन्तै जवाफ दिनेछौं।
कुनै थप प्रश्नहरू? हामीलाई फोन गरेर सम्पर्क गर्नुहोस् र हामीलाई कुरा गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। यदि तपाइँ तयार हुनुहुन्छ भने कल गर्न समय तालिकाबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ र हामी उत्कृष्ट जवाफहरू र छनौटहरू प्रदान गर्नेछौं।
नि: शुल्क समर्थनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
प्रायजसो मगगको खेती प्रविधिको युरी बृद्धी वेबसाइट मा एक गाइड मार्फत नि: शुल्क समर्थन संग छ। हामी बीएसएफको खेतीको लागि निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान गर्दछौँ, र हामी सफलताको लागि सहयोगको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछौं। तपाईंले घरको वा तपाईंको खेतमा अभ्यास गर्नुहुने एक काम प्याकेज किन्न आवश्यक छ।
Yurie BSF फारम स्थानहरु को 99 चयन
प्रारम्भिक, सानो, मध्यम र ठूलो माईग्रो व्यवसायको विश्लेषण गर्नुहोस्
मागेगा खरीद र बिक्री
Maggot को FAQ, र
म्याग्लट खेतीको साप्ताहिक अपडेट।
अभिवादन सुरक्षित र सफाई मेरो इन्डोनेशिया
कुनै पनि समयमा हामीलाई सम्पर्क गर्न संकोच नगर्नुहोस्।
सम्बन्धित खोज: हमसे संपर्क गर्नुहोस, हमसे संपर्क गर्नुहोस, yurie bsf संपर्क, हमसे संपर्क गर्नुहोस
प्रोबीबायोटिक्स संग कैटफिश को उत्पादन बढाव
5-7 दिन स्वयं-फिडिंग क्याटफिश बनाउनुहोस्
नवीनतम 2019 क्याटफिश खाना कसरी बनाउने?
कैफफिड फिडको लागि बीएसएफ म्याग्गोट र तेल खाम लुगा
ईएमएक्सएनमिक्सको साथ नारियल ड्रेग र टोफु ड्रेज भर्ती गरियो